05/09/2021 - ALANZAYAR
ဦးပိန်တံတား ကန်ပတ်လမ်းတွင် စကစယာဉ် ဖေါက်ခွဲခံရတဲ့ ရုပ်သံဖိုင်
ဦးပိန်တံတား ကန်ပတ်လမ်းတွင် စကစယာဉ် ဖေါက်ခွဲခံရတဲ့ ရုပ်သံဖိုင် မန္တလေးတိုင်း၊ အမရပူရမြို့နယ် ဦးပိန်တံတား ကန်ပတ်လမ်းတွင် စစ်ကောင်စီယာဉ် ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီး အနည်းဆုံး နှစ်ဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကြောင်း ဒေသခံများက မဇ္ဈိမကို သတင်းပေးပို့သည်။ ယနေ့ စက်တင်ဘာ ၅ ရက် နံနက် ၁၁နာရီကျော်တွင် စစ်သား ၁၀ […]
ရှေ့ဆက်ဖြစ်လာမယ့် ကိုရိုနာကပ်ရောဂါ နိမိတ်ကို မိန့်ကြားလိုက်တဲ့ မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ဘုရား
ရှေ့ဆက်ဖြစ်လာမယ့် ကိုရိုနာကပ်ရောဂါ နိမိတ်ကို မိန့်ကြားလိုက်တဲ့ မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ဘုရား ရှေ့ဆက်ဖြစ်လာမယ့် ကိုရိုနာကပ်ရောဂါ နိမိတ်ကို မိန့်ကြားလိုက်တဲ့ မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ဘုရား၁=ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါကြီးဟာ လူသားပေါင်း သန်း (၁၀၀) ကျော်ကူးစက်ခံရမယ် ၂=၂၀၂၀ နဲ့ ၂၁ ခုနှစ် တွေဟာ တစ်ကမ္ဘာလုံးအတွက် အဆိုးဆုံးနှစ်တွေဖြစ်တယ်စီးပွားပျက်ကပ်တွေလည်းဖြစ်မယ်ဘုရားတရားမြဲကြပါ အဆိုးတွေလာမယ် ၂၀၂၂ မှ အကောင်းဘက်ပြန်ရောက်မယ် […]
အိမ်စောင့်ဂျပုရှုံးနိမ့်ဖို့ အတိကျပြောပြီ…. အမေရိကန်စစ်တပ်မှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ ဗိုလ်မှူးကြီးမီမီဝင်းဘတ်က PDF တွေရဲ့ စွမ်းဆောင်မှုအရည်အချင်းကို သူအရမ်းသဘောကျပါတယ်။ အချိန်တိုအတွင်းမှာ စစ်ပညာသင်ကြားပြီး ရရာလက်နက်ကိုစွဲကိုင် စစ်အာဏာရှင်တွေကို ရင်ဆိုင်အံတုနိုင်တာ နည်းတာစွမ်းဆောင်ရည်မဟုတ်ဘူး/. အပြည့်အစုံကို အောက်ကဗွီဒီယိုဖိုင်တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ ခရက်ဒစ်ဗွီဒီယို… အိမျစောငျ့ဂပြုရှုံးနိမျ့ဖို့ အတိကပြွောပွီ အမရေိကနျစဈတပျမှာ တာဝနျထမျးဆောငျခဲ့တဲ့ ဗိုလျမှူးကွီးမီမီဝငျးဘတျက PDF […]
ဝါသနာအတွက် ”မိုက်” လဲကိုင်ခဲ့သလို အမှန်တရားအတွက်လဲ သေနတ်ကိုင်ရဲတဲ့ လွတ်မြောက်နယ်မြေမှ အဆိုတော်မူးလာ
ဝါသနာအတွက် ”မိုက်” လဲကိုင်ခဲ့သလို အမှန်တရားအတွက်လဲ သေနတ်ကိုင်ရဲတဲ့ လွတ်မြောက်နယ်မြေမှ အဆိုတော်မူးလာ ကိုယ်ပိုင်အရည်အချင်းတွေနဲ့ အနုပညာလောကထဲ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့ အဆိုတော်မူးလာကတော့ လက်ရှိမှာ လွတ်မြောက်နယ်မြေကို ရောက်ရှိနေတာ ဖြစ်ပါတယ်..။ အရေးတော်ပုံကြီး စတင်ခဲ့ဖေဖော်ဝါရီလအစပိုင်းကတည်းက လမ်းပေါ်ထွက်လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေမှာ တက်တက်ကြွကြွပါဝင်ခဲ့သလို အခုအချိန်မှာလည်း လက်နက်ကိုင်ရင်း ပြည်သူတွေအတွက် ကြိုးစားနေတာ ဖြစ်ပါတယ်..။ မူးလာကတော့ […]
ကိုတင်ဖေဟာ ဆီသည်လေးဖြစ်သွားပါပြီလို့ ပရိသတ်တွေကို ပြောလာတဲ့ သရုပ်ဆောင် အောင်ရေချမ်း
ကိုတင်ဖေဟာ ဆီသည်လေးဖြစ်သွားပါပြီလို့ ပရိသတ်တွေကို ပြောလာတဲ့ သရုပ်ဆောင် အောင်ရေချမ်း ပရိသတ်ကြီးရေ ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တော် သရုပ်ဆောင် မင်းသားချော အောင်ရေချမ်း ကတော့ MRTV_4 ဇာတ်လမ်းတွဲတွေ ကနေ လူသိများလာပြီး ခုချိန်မှာတော့ အောင်မြင်တဲ့အနုပညာရှင် တစ်ယောက်ဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူးနော်.. အောင်ရေချမ်းကတော့ ကျရာနေရာကနေ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်တတ်ပြီး ပီပြင်တာကြောင့် […]
ရုတ်တရက် အောက်ဆီဂျင်တွေ ထိုးကျနေတဲ့ သရုပ်ဆောင် ဦးချစ်စရာအတွက် လိုအပ်တာများ ကိုယ်တိုင် အစအဆုံး လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ ဝေဠုကျော်
ရုတ်တရက် အောက်ဆီဂျင်တွေ ထိုးကျနေတဲ့ သရုပ်ဆောင် ဦးချစ်စရာအတွက် လိုအပ်တာများ ကိုယ်တိုင် အစအဆုံး လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ ဝေဠုကျော် လိုအပ်တဲ့နေရာတွေကို သေချာ စီစစ်ပြီး တတ်နိုင်သလောက် အခြေခံ စားသောက်ကုန်တွေ ပေးဝေလှူဒါန်းကာ အစွမ်းကုန် ဖေးမကူညီနေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုဗစ်ရောဂါတွေ ဖြစ်ပွားနေချိန်မှာလည်း လူနာတွေအတွက် အောက်ဆီဂျင်အိုးများ လှူဒါန်းကာကူညီပေးလျက်ရှိပါတယ် […]
“ယနေ့ မဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဆွမ်းခံကြွ အပြီး နတ်တွေလာရောက်ဖူးမြော်သလို ကောင်းကင်မှာ မီးစလိုက်လို အလင်းတန်းတွေ့လိုက်ရ”
“ယနေ့ မဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဆွမ်းခံကြွ အပြီး နတ်တွေလာရောက်ဖူးမြော်သလို ကောင်းကင်မှာ မီးစလိုက်လို အလင်းတန်းတွေ့လိုက်ရ” ယနေ့ မဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဆွမ်းခံကြွ အပြီး နတ်တွေလာရောက်ဖူးမြော်သလို ကောင်းကင်မှာ မီးစလိုက်ထိုးသလို အလင်းတန်းတွေ့လိုက်ရကြောင်း သွားရောက်ဖူးမြော်ခဲ့ကြတဲ့ ပြည်သူတစ်ဦးက လူမူကွန် ယက်မှာပုံနဲ့ တကွရေးသားပြောပြထားပါတယ်။ အဆိုပါရေးသားပြောပြထားတာကို ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။ “ဆရာတော်ကြီးဆွမ်းခံကြွအပြီးချိန်တွင် နတ်တွေလာရောက်ဖူးမြော်ပါတယ်။ […]
ကိုယ်တိုင်မှာ အောက်ပိုင်းမရှိ၍ ဝှီးချဲလ်လေးဖြင့် သွားလာနေရသော်လည်း သားငယ်လေးကို ကျောင်းလိုက်ပို့ပေးရန် မပျက်ကွက်ခဲ့သည့် ဖခင်တစ်ဦး၏ မေတ္တာ
ကိုယ်တိုင်မှာ အောက်ပိုင်းမရှိ၍ ဝှီးချဲလ်လေးဖြင့် သွားလာနေရသော်လည်း သားငယ်လေးကို ကျောင်းလိုက်ပို့ပေးရန် မပျက်ကွက်ခဲ့သည့် ဖခင်တစ်ဦး၏ မေတ္တာ တစ်ခါတစ်လေတွင် ပုံရိပ်လေးတစ်ခုဟာလည်း စကားများစွာကို ပြောစရာမလိုဘဲ အရာအားလုံးကို ဖော်ပြနေတတ်ပါတယ်။ယခုတွင်လည်း ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှ Tatay Alejandroဆိုသည့် ဖခင်တစ်ဦး၏ သားလေးကို ကျောင်းပို့ပေးနေသည့် ပုံရိပ်များသည် လူအများ၏ နှလုံးသားကို ရိုက်ခက်စေခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ […]
ရေဝေးသုသာန်နားမှာ စွန့်ပစ်ထားသည့် လသားအရွယ်ကလေးလေးကို ခေါ်ယူမွေးစားမည့် သရုပ်ဆောင် ခိုင်နှင်းဝေ
ရေဝေးသုသာန်နားမှာ စွန့်ပစ်ထားသည့် လသားအရွယ်ကလေးလေးကို ခေါ်ယူမွေးစားမည့် သရုပ်ဆောင် ခိုင်နှင်းဝေ သရုပ်ဆောင် ခိုင်နှင်းဝေကတော့ အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့ ကလေးငယ်များကို ခေါ်ယူပြီး သူမကိုယ်တိုင် ပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးနေပါတယ်။ အစားအသောက်များကိုလည်း အာဟာရရှိစွာချက်ပြုတ်ပြီး သူမကိုယ်တိုင် ကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်ပေးနေပါတယ်နော်။ အခုတစ်ခါမှာဆိုရင်လဲ သရုပ်ဆောင်ခိုင်နှင်းဝေက ရေးဝေးသုသာန်နားမှာစွန့်ပစ်ထားသည့် သားအရွယ်ကလေးလေးကို ခေါ်ယူမွေးစားမည့်အကြောင်းကိုလည်း ပြောပြလာပါတယ်နော်။ ရေဝေးသုသာန်အထွက်နားမှာ လသားအရွယ်သားလေးတစ်ယောက်ကို […]
လူတိုင်းအတွက် မနှစ်မြို့ဖွယ်ရာဖြစ်စေခဲ့သည့် မင်္ဂလာဆောင်အကြိုဓာတ်ပုံကို အများနှင့်မတူအောင် သုဿန်တွင် သွားရောက်ရိုက်ကူးခဲ့ကြသည့် စုံတွဲနှစ်ဦး
လူတိုင်းအတွက် မနှစ်မြို့ဖွယ်ရာဖြစ်စေခဲ့သည့် မင်္ဂလာဆောင်အကြိုဓာတ်ပုံကို အများနှင့်မတူအောင် သုဿန်တွင် သွားရောက်ရိုက်ကူးခဲ့ကြသည့် စုံတွဲနှစ်ဦး ချစ်သူစုံတွဲတိုင်းအတွက် ဖြစ်မြောက်လာစေရန် အမြဲဆန္ဒရှိနေသော အိမ်မက်လေးမှာ လူအများနှင့်အတူ စည်ကားခမ်းနားသော မင်္ဂလာပွဲလေးကို ကျင်းပနိုင်ရန်သာဖြစ်ပေသည်။မင်္ဂလာပွဲလေးတွင် ဘဝ၏အမှတ်တရများကို ဖန်တီးရင်း ရိုက်ကူးခဲ့သော မင်္ဂလာဆောင်ဓာတ်ပုံများကို နောင်တစ်ချိန်ကျလျှင် ပြန်ကြည့်နိုင်မည်ဖြစ်ပေသည်။ ယခုတွင်လည်း ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှ စုံတွဲနှစ်ဦးတို့ဟာ သူတို့၏ […]